Author: Voodoogore Vudokinos
Wax Badan Ka Baro Muhiimadda Uu Leeyahay Cilmiga Bulshada – Goobjoog Education
In badan waxa canaan cilmigaa fuulaa ruuxii gaf ku kaca, waxa lagu tilmaamaa mid maan-gaab ah, waxa lagu sagootiyaa magac xun, waxaana laga qaadaa maamuuskii iyo milgihii uu bulshada ku dhex lahaa. Waa mid ka mid ah mufakiriintii ugu waaweynayd ee dalka Ingiriiska, waxa uu saameyn ballaaran lahaa dhamaadkii qarnigii 19aad, waxaana loo aqoonsan yahay inuu yahay aabihii labaad ee cilmigan bulshada, kadib Auguste Comte. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Dooro mawduuca aad rabtid 2. Twitter LinkedIn Facebook Google. Mid waxaa loo adeegsadaa dhisidda aragti cilmiyeed ama daahfurka aqoon cusub, tan kale waxaa loo isticmaalaa tijaabinta ama beeninta, xaqiijinta aragti cilmiyeedyada.
Guud ahaan buuggaas waxa ku qoran waxa ka mid ah: Intaas ka dib inanku waa barbaar halka gabadhana gashaanti loogu yeedho. Tan hore waa maaddo ka mida felsafadda, taas oo falanqaysa gundhiga jiritaanka shayga, dhacdada ama waxa markaasi saaran masraxa dood akademiyeedka. You are commenting using your WordPress.
Tusaale ahaan, haddii uu macalinku ama waalidku ilmaha yar ku celceliyaan saaqid ayaad tahay, waxa uu kolka danbe dhab u noqonayaa saaqid, haddii la yidhaahdo tuug baad tahay, kolka danbe falkii ayaa uu ku kacayaa. Ereyada qaar baa cusub oo muhiim ah — lagana yaabo inaadan aqoon. Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Felsafadda Cilmibaarista Casharkii saddexaad waxa aynu ku soo baranay xeerarkii laga dejiyey ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista.
Dhanka kale, barashada aqoonta waa maaddo ka mida felsafadda, taas oo ku dulwareegata aragtiyada la xiriira aqoonta. Akhri qoraalka, eeg sawirrada oo samee laylisyada ku yaal halka bogga u hooseeysa. Ma aanad dhammayn mawduuca ilaa aad akhridid qoraalada oo dhan, oo aad ka jawaabtid laylisyada oo dhan. Aadanuhu waxa uu baaritaan ku sameeyay xilliyadii kala duwanayd ee lasoo dhaafay mawaadiicda khusaysa dhanka bulshada ee fikirka, waxqabadka oo keeni kara inuu aadanuhu uu gaaro ilbaxnimo casri ah oo xoogga la saareysa xiriirka wanaagsan ee fayow ee aadanaha dhexdooda ah, waxaana la qabtay shirar caalami ah oo looga gollahaa in lagu gaaro nabad iyo wada noolaanshiyo, halkaana waxaa kasoo dhex baxay fahamka cilmiga Bulshada.
La mid maaha cilmiga loo yaqaan social science ee aan hore uga soo faalloonnay; hase ahaatee, waa mid madax bannaan. Xilligii Yurub wejihaysay kacdoonkii liddiga ku ahaa is dhexgelka kaniisadda iyo qaranka ama is-garab socodka diinta iyo dowladnimada, waxaa masraxa akademiga ka soo muuqday ol-ole looga soo horjeeday doorka ay diinta ka ciyaari karto cilmiga sayniska iyo felsafadda.
Cilmibaare walba oo doonaya in uu qaado waddada maantus baarineedka waa ku waajib in uu tixgeliyo qodobada hoose:. Ugu dambeyn, dareentus baarineedka iyo maantus baarineedka, labaduba waxay muhiim u yihiin horumarinta sayniska iyo cilmibaarista. Maantus Baarineed iyo Dareentus Baarineed Casharkii lixaad waxa aynu ku baranay iskuul fekerka tarjumidda Interpretivism. Fasiraadda xogta ama macluumaadka.
Magaca Ibnu Khaldun waa mid bari iyo bogax ba ka dhacay. Heerka aragtida iyo heerka daawashada Theoretical level and Observational level. By continuing to use this website, you agree to their use.
Ninkan Ibnu Khaldun loo yaqaan buuggiisa ugu caansan ee waxa loo yaqaan Muqaddimah ama Prolegomena. Cidna kama qarsoona kaalinta iyo muhiimadda ballaaran ee cilmiga bulshada uu leeyahay iyo sida uu u saameeyo nolosha qofka iyo bulshada iyo horumarka fakarka bulshada. Casharkii saddexaad waxa aynu ku soo baranay xeerarkii laga dejiyey ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista.
Dhanka kale, dareentus baarineedka waxaa adeegsada cilmibaareyaasha iskuul fekerka togannidda iyo mad-habka itusoo itaabsii Positivist and Empiricist. Dhanka kale, ujeedka dareentus baarineedka waa tijaabinta aragti jirtay, iyada oo la adeegsanayo xog ilqabatineedka.
Waana buugga cilmiga ugu badan ee sociology ga laga bartay.
Xaqiijinta ama beeninta mala-awaalka ama aragtida. Cilmiga Bulshada Socology waa diraasadda qaab cilmiyeed loo baaro hab dhaqanka shakhsiyaadka bulshada ka tirsan iyo aasaaska bulshadu ay u qorsheyso noloshooda, waxaanuu cilmigani muhiimad siinayaan daraasadda xiriirka qofku uu la leeyahay bulshada, waxyaabaha saameynta bulshaa leh xiriirkaas iyo cid kasta kaalinteeda.
Hadaba, muhiimadda ballaaran ee cilmigani leeyahay oo aad u farabadan, anagu waxaan ku soo koobaneynaa qodobadan:.
Baaris Akademiyeedka Cilmiga Bulshada: Casharkii 4aad | Hassan Mudane
Togannidda Xilligii Yurub wejihaysay kacdoonkii liddiga ku ahaa is dhexgelka kaniisadda iyo qaranka ama is-garab socodka diinta iyo dowladnimada, waxaa masraxa akademiga ka soo muuqday ol-ole looga soo horjeeday doorka ay diinta ka ciyaari karto cilmiga sayniska iyo felsafadda. Cilmibaaraha adeegsada maantus baarineedka, waxaan ku matali lahaa sida qof saaran buur dheer dusheeda, kaddibna hoos u soo daadagaya.
Muuqaalka Akhri Wax ka cilmigs Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Dhinaca kale, haddii la yidhaahdo indheer-garad ayaad tahay, maan-dheeri ayaa Alle kugu mannaystay ugu danbayn waxa laga fishaaba waa sida lagu tilmaamay.
You are commenting using your Twitter account. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa isbarbardhiga labada hab baarineed ee ugu caansan cilmibaarista, taas oo gundhigoodu dhaca felsafadda. Ka hor inta aynan gudaha u galin felsafadda baarista, wax yar aynu is dul-staagno waxa ay kala yihiin jiritaanka maaddada iyo barashada aqoonta. Sida ku xusan buug aanu helnay cjlmiga laga qoray Ibnu Khadun iyo Aragtiyadiisii uu soo kordhiyay. Ol-olehaas waxaa hoggaaminaayey feylasuuf Auguste Comte Waa caalim Falasuuf ah oo u dhashay dalka Faransiiska, waa caalimkii bixiya magaca cilmiga Bulshada ee maanta loo yaqaanno.
Marka xiga waa garmaweyn, marka xiga waa oday ama habar, marka xiga waa coomir xaaddu caddaatay, intaas ka dib labaduba waxay u iishaan xagga geerida waxaana ay Rabbi ku bilaabmaan baryo bulshdaa dharaarihii hore wixii ay gaf galeen Alle uga dhaafo.
Si kale, ujeeddada maantus baarineedka waa aragti dhisid, iyada oo la adeegsanayo xogta la xiriira ilqabatada. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa felsafadda baarista gaar ahaan labada iskuul feker, ee saldhiga u ah baaris cilmiyeed walba. Fill in your details below or click an icon to log in: Waa maaddo falanqaysa sida aynu ku ogaan bukshada waxa aynu rabno in aynu ogaano.
Waxaa jirta laba hab oo aan isleeyahay in ay waajib tahay in la maro inta lagu guda jiro hannaanka baarista, waxa ayna kala yihiin: Hadaba, muhiimadda ballaaran ee cilmigani leeyahay oo aad u farabadan, anagu waxaan ku soo koobaneynaa qodobadan: Tijaabooyin badan oo ay sameeyeen aqoonyahannada falsafadda, cilmi-nafsiga iyo dabcan cilmigan bulshada waxa ay ogaadeen sugnaanshaha hawraartaas.